Bitsibitsika Afghana: Fitsarana, Fanavakavahana & Biby Mampalahelo · Global Voices teny Malagasy
Bitsibitsika Afghana: Fitsarana, Fanavakavahana & Biby Mampalahelo
Voadika ny 17 Oktobra 2018 7:18 GMT
Tezitra i Afghan Warrior fa nomelohina ny sefon'ny sampam-pitsikilovana nandritra ny vanim-potoana kaominista fa ireo hafa nanao ratsy kokoa noho izany kosa dia mitana andraikitra ao anatin'ny governemanta. Milaza ilay blaogera
”Tena mampalahelo be rehefa tsy misy mitory ireo mpanao heloka bevava mitàna toerana ambony ao anatin'ny governemanta- olona izay nanimba 70% tamin”i Kabul renivohitra ary namono olona mihoatra ny 70 000 tao Kabul fotsiny teo anelanelan'ny taona 1992 sy 1996. Nitondra tena toy ny mpanjaka avokoa ireo mpitarika Jihady ireo tany amin'ny faritra nisy azy. Nisy isanandro ny fandrobàna sy ny famonoana. Fa ankehitriny, ao anatin'ny governemanta sy ny parlemanta amin'izao fotoana izao ny sasany amin'izy ireo ary tsy misy fanenjehana azy ireo. Matahotra ny hitory azy ireo ny olona fa raha toa ka managadra ireo mpanao heloka bevava ireo ny fanjakana ary mitondra azy ireo manoloana ny fitsarana, mazava ho azy fa olona an'arivony maro no hijoro ho vavolombelona nahita maso ny heloka feno habibiana nataon'izy ireo. Mazava ho an'ny rehetra fa samy manana ny fahavalony avoaka ny governemanta rehetra. Toy ny Mujahideen izay nanohitra ny fanjakana kaominista nifehy ny governemanta teo anelanelan'ny taona 1979 sy 1992. Nandritra izany fotoana izany, samy namono avokoa ny avy amin'ny andaniny sy ny ankilany, ary tsy mety ny fanomezana ho an'ny lehiben'ny sampam-pitsikilovana samirery ny andraikitra rehetra tamin'ny zavatra nataon'ny hafa.”
Milaza i Maykadeh fa tena ampijaliana ary araraotina ara-pananahana mihitsy aza ny biby any Afghanistana. Manoratra izy
”Tsy maintsy mitarika ireny sarety mavesatra, feno be ireny izy ireo raha toa ka sady voavely mandritra ny tontolo andro. Avy eo, toy ny vehivavy rehetra, tsy maintsy miandry ny hanararaotan'ny lehilahy sorena ara-pananahana azy izy ireo amin'ny alina.
Ny mitondra ahy amin'ny zavatra iray hafa, raha toa ka hanatsahatra ity fanavakavahana ara-pananahana mazosista ity izy ireo, ary tsy hanararaotra ireo biby fiompy sy ankizilahy kely intsony (izay tena miely be aty – tena mahagaga be ho anà firenana Miozolomàna!)
Ankehitriny dia mahatsiahy tantara iray aho. Tonga tao amin'ny tanàna kelin'i Koochi (Pashtun mpifindrafindra monina) ny lehilahy iray miasa ho ana fikambanana na hafa ao amin'ny faritanin'i Uruzgan ary nitaraina izy ireo fa nidina tamin'ny helikoptera ireo Amerikana ary nangalatra rameva iray. Gaga ary somary feno ahiahy, nanontany izy hoe inona no antony tokony hanaovan'izy ireo izany? Eny, araka ireo Koochi, rameva tanora ary tena tsara tarehy be izany, noho izany mety nangalarin'ireo Amerikana mba hanaovana firaisana ity farany. Tantara marina.”